प्रकृति र हाम्रो सोच | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / प्रकृति र हाम्रो सोच
Posted by: युगबोध in विचार October 15, 2018	0 147 Views
हामीले प्रकृतिमा एक मात्र अधिकार हाम्रो हो भन्ने सो च बनायौ ं । त्यसै मुताविक आप्mनो चिन्तन बनायौ ं र चिन्तनअनुसार ब्यवहार ग¥यौ ं । अनि भन्यौ ं प्रकृति अपार छ । मानव विकासको निम्ति जति सक्दो लुट भन्ने हाम्रो परम्परावादी चिन्तनले मानिसको उपभो क्तावादी संस् कृतिको यसरी विकास गरिदियो कि विलासीपूर्ण वस् तुहरु पनि उपभो ग्य वस् तु बन्दै आइरहे का छन् र ह“ुदै पनि गइरहे का छन् । यिनै वस् तुुलाई मानव आवश्यकता भन्दै प्रकृतिको चकोर् दो हन र विनाश गरिदै आएको परिणाम आज मानिस चौ तर्फीरुपमा संकटमा पदैर् गइरहे को छ । मानवलगायत सम्पूर्ण प्राणीको अस् ितत्वका आधारहरु हावा, पानी, घाम, माटो सबै प्रदूषित ह“ुदै गइरहे का छन् । हामीले जिउनको लागि प्रयो ग गरिने हरे क वस्तु मन्दविष बन्दै गइरहे का छन्  । जसले गर्दा ठूला–ठूला रो गको शिकार भइरहे का छांै भने दिनदिनै नया“–नया“ रो गहरुको आगमन भइरहे को छ । यति मात्रै हो इन, मान्छे को मन मस् ितष्क पनि प्रदूषित हु“दै गइरहे को छ । जसले गर्दा मपाइ“ र अहंता दिनदिनै बढ्दै गइरहे को छ । हाम्रा परम्परागत राम्रा सामाजिक सम्बन्धहरु टुट्दै फुट्दै गइरहे का छन् । मान्छे दिनह“ु एक्लो बन्दै गइरहे को छ । तै पनि प्राणीमा सबै भन्दा सचे त र सवोर् त्कृष्ट भन्दै छांै  । जसरी धर्ती सीमित छ त्यसरी नै प्रकृति पनि सीमित छ । यसको सावधानीस“ग उपयो ग गदैर् दिगो विकास गर्नुपर्दछ भन्ने सो चको अझै विकास गर्न सकिरहे का छै नांै  । प्रकृतिको विनाश हो इन दिगो विकास गरे मात्र यो धर्ती मानवहरुको निम्ति उपयो गी बन्ने छ । हो इन भने चा“डै नै मानवजातिको अस् ितत्व यस धर्तीबाट लो प हुने निश्चित छ । यसतर्फ सो च्ने र व्यवहारमा उतार्न अब ढिलाइ गर्नु हु“दै न । मान्छे सामाजिक प्राणी हो ।
मान्छे को चिन्तन, विचार र व्यवहारले सामाजिक सम्बन्धहरुमा दरार ल्याइरहे को छ । हामीले निर्माण गरे को सांस् कृतिक विविधताको सही समन्वय गर्न नसक्दा पनि सामाजिक सम्बन्धहरुमा झन दरार पै दा गर्न मद्दत पु¥याएको छ । धर्म, जात, वर्ग, क्षे त्र, राष्ट्रको मान्यताले पनि सामाजिक सम्बन्ध तो ड्दै र फुटाउ“दै लगिरहे को छ । तर अहिले सम्पूर्ण मानिसको साझा समस् याको रुपमा पर्यावरणीय समस् या दे खा परिरहे को छ । यसको समाधान अब साझा सो च, चिन्तर र कामबाट मात्र हल गर्न सकिन्छ । त्यसै ले अब जातीय, धार्मिक, वर्गीय र राष्ट्रिय सम्बन्धहरु जति चा“डै सुमधुर बनाउ“दै लग्दै नौ ं त्यति झन भन्दा झन ठूलो समस् याको भुमरीमा मानव जाति फस् ने निश्चित छ ।
मानिसका आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गनेर् नाममा १८ आंै शताब्दीमा जब औ द्यो गिक क्रान्ति शुरु गरियो तबदे खि नै वायुमण्डलमा हरितगृह ग्या“सहरु फाल्न शुरु गरियो  । औ द्यो गिक क्रान्तिले जति रफ्तार लियो त्यति नै तीब्ररुपमा वायुमण्डलमा हरित गृह ग्या“स बढ्दै गयो  । त्यति मात्रै हो इन जल र जमिन समे त प्रदूषित बन्न शुरु ग¥यो  । अहिले आएर वायु मण्डलमा कार्वनडाइअक्साइड लगायतका ग्या“सहरुको जालो यति बाक्लो रुपमा रहन पुग्यो जसले चौ तर्फी संकट निम्ताउनपुग्यो  । सूर्यबाट आउने किरणहरु पृथ्वीमा टक्राउने र पुनः अन्तरीक्षमा फर्कने प्रक्रिया निरन्तर चल्दा समे त यहा“को वातावरणा सहज थियो  । समस् या तब बढ्न शुरु भयो जब सूर्यबाट आउने किरणहरु पृथ्वीमा टक्राएर अन्तरीक्षमा नफर्कि हरितगृह ग्या“सको जालो ले ती किरणहरुलाई पुनः पृथ्वीमा फर्काइदिएपछि यहाको वायुमण्डलमा तापक्रम बढ्न थाल्यो  । जसले हाम्रो जलवायु परिवर्तनलाई अप्राकृतिकरुपमा परिवर्तन गराउन थाल्यो  । यसै को परिणति हो आजको समस्या ।
विज्ञहरुको भनाइअनुसार वायुमण्डलमा हरितगृह ग्या“सको ३९१ पि.पि.एम. पुगिसके को छ । यसलाई तत्काल ३०० पि.पि.एम.मा झार्न नसक्ने हो भने समस् या विकराल बन्न सक्ने तर्फ सचे त बनाइरहे का छन् । तर हाम्रा शासक र हामी जनतामा बढ्दो मपाइ“ र अहंताले कम हुने त परै जाओ स झन बढाउ“छ कि जस्तो पो दे खिइरहे को छ । मपाइ र अहताले विलासीपूर्ण जीवन जिउनतिर प्रे रित गर्दछ भने राष्ट्रिय अहंता बढ्नाले रासायनिक अस् त्रको विकास गर्न प्रे रित गरिरहने छ ।
अप्राकृतिक जलवायु परिवर्तनले हाम्रो मनसुनमा प्रभाव पारिरहे को छ । जसको कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि र सुक्खाको समस्या बढिरहे को छ ।
हिमपातको पनि यस् तै अवस् था छ । से तो हिमाल अब कालो पहाड बन्ने खतरा बढिरहे को छ । जसले गर्दा हिमताल फुट्ने , हिमनदी बढ्ने र खुम्चन सक्ने प्रक्रिया शुरु हुने अवस् था सिर्जना ह“ुदै गइरहे को छ । गर्मी बढ्दो छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण माघको १५ गते पछि फुल्ने आप पुसको अन्त्यतिर फुले को दे खियो  । सबै ले हे र्नुस् त आफ्ना आ“पका रुखहरु यसले के संक्त गर्दछ भने एक महिना पहिले नै गर्मी शुरु भइसक्यो  । यति मात्र हो इन पहाडमा पुल्ने लालीगुरा“स चा“डै फुल्न थाले  । तराईमा फल्ने तरकारी मुस् ताङमा फल्न थाल्यो  । अप्राकृतिक जलवायु परिवर्तनले वनस् पति र वन्यजन्तु उत्तरतिर बढ्दै छन् ।
हुन त कतिपयले के पनि भन्ने गरे को सुनियो भने तराईमा हुने तरकारी अब मुस् ताङमा फल्नथाल्यो  । यो राम्रो पक्ष हो  । उहाहरुलाई के थाहा भएन भने तराईमा फल्ने तरकारी मुस् ताङमा फल्न थाले पछि मुस् ताङमा पाइने वस् तुहरु अब कहा“ पाउने ? यसको मतलव त्यहा“ फल्ने खाद्यवस् तु, फलफूल, जडीबुटीमा प्राकृतिक गुण नष्ट हो ला कि नहो ला ? कित उनीहरुको उत्पादन अझ उचाइमा जान्छ । प्रकृतिले ठाउ“ अनुसार वस् तु सिर्जना गरे को छ ।
त्यसमा परिवर्तन हुनु कुनै पनि हिसावले ठीक ह“ुदै न । अति कम विकसित राष्ट्रको रुपमा हाम्रो मुलुक छ । त्यसै ले अति कम हरितगृह ग्या“से जहरु उत्सर्ग गर्दछ । तर हाम्रो भूबनो टका कारण सबै भन्दा बढी समस् या हामीहरुले भो ग्न विवश हु“दै छांै  । वास् तवमा भन्ने हो भने हामीले उत्सर्ग गनेर् हरितगृह ग्या“स भन्दा बढी कार्वनडाइअक्साइड हाम्रो वनजंगलले खपत गर्दछ । तै पनि सबै भन्दा बढी अप्राकृतिक जलवायुको प्रभावमा हामी परिरहे का छौ ं । दिनह“ु तात्तिदो वायुमण्डल र पृथ्वीको सतहले हामीलाई गम्भीर संकटतिर लग्दै छ । जस् तै बाढी पहिरो को समस् या, पानीको मूलहरु सुक्ने , जमिनको सतहमा रहे को पानी झन गहिराईमा जाने आदि यसले मानव जीवन सामाजिक, सांस् कृतिक, आर्थिक विकास, जै विक विविधता, पर्यटकीय विकास आदि क्षे त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहे को छ । तै पनि यस् तो साझा मानवीय समस् या कसरी हल गनेर् भन्ने तिर हाम्रो सो च छै न । हामीलाई नखाएको विष लागिरहे को छ । यसको क्षतिपूर्ति औ द्यो गिक दे शहरुले हामीलाई दिनुपर्दछ । तर हामीले भिक माग्ने र उनीहरुले दिने प्रचलनको अन्त्यको लागि हामीले आवाज उठाउन सकिरहे का छै नौ ं । हामीले प्रकृतिलाई जति लुटे र वा विनाश गरे र सम्पत्ति थुपारे पनि समस् याबाट मुक्ति पाउने छै नौ ं । बरु झन समस् या बढाउने छौ ं । यसतर्फ अब सो च्ने हो कि ?
आफूलाई पर्यावरणविद् भन्ने हरुले पनि जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस् या भने र भन्ने , ले ख्ने गरे को दे ख्दा अचम्म लाग्छ । वास् तवमा जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक नियम हो  । यदि जलवायुु परिवर्तन हुदै नथ्यो भने मान्छे को अस् ितत्व यस धर्तीमा हुने थियो कि थिएन । अवश्य पनि सम्भव हुदै नथ्यो हो ला ।
प्राकृतिकरुपमा जलवायु परिवर्तन ह“ुदै आइरहे को पुष्टि डाइनाश्वरहरु यस धर्तीबाट लो प हुनुले पनि गरिरहे को छ । प्राकृतिकरुपमा हुने जलवायु परिवर्तन सुस् त गतिमा हुने र यसलाई सहजै पचाउन सकिने भएकाले नै धर्ती सृष्टिको लागि उपयुक्त बन्न सके को हो  । समस् या त तब आयो जब मानिसकै सो च, चिन्तन प्रकृति बिरो धी बन्यो  । अझ जथाभावी गरिएको औ द्यो गिक क्रान्ति, खानी उत्खनन र विभिन्नखालका रसायनको उत्पादन, अस् त्रको विकासको परिणति हो  ।
त्यसै ले अहिले समस् या बढ्दै गएको अप्राकृतिक रुपमा हु“दै गइरहे को जलवायु परिवर्तनले हो  । हामीले अप्राकृति जलवायु परिवर्तनको कारण भने नौ ं अप्राकृतिक किन भयो ? यसको मुख्य दो षी को छ ? जवाफदे हीे को बन्ने आदि प्रश्न खडा हुन्छन् । अनि दुनिया“ले थाहा पाउ“छ गरिव दे शले यो समस् यास“ग कसरी जुध्ने ? उसले नगरे को अपराधको सजाय किन पाउने ? क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने ? त्यसै ले सत्य बो ल्ने र ले ख्ने गरे नै सत्य कुरा बाहिर आउने हो  । हामीले गदैर् नगरे को अपराधको सबै भन्दा बढी सजाय पाउने अवस् था भइरहे को छ । यसको क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने ? अवश्य पनि पाउनुपर्छ । यसको निम्ति संगठित आवाज उठ्नुपर्दछ । हामी पनि हाम्रा वनजंगल संरक्षण र दिगो विकासमा जुट्नुपर्दछ । अब हरित शहर, हरित गाउ“ बनाउनतिर लाग्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनले कहा“–कहा“ नकारात्मक प्रभाव पार्दछ र त्यसबाट जो गिएर यसरी जानुपर्दछ भने र जनतालाई सचे त बनाउनुपर्दछ । अन्तमा विजयादशमी २०७५ ले सबै मा सुख शान्ति ल्याओ स्, समृद्धिको यात्रामा मुलुकलाई अगाडि बढाओ स् र प्रकृति संरक्षणमा सबै को ध्यान जाओ स् भन्दै शुभकामना !
Previous: सिनो बेच्नेलाई कारवाही गर्नु प्रशंसनीय काम
Next: बलात्कृत बालिकाको उपचारमा आर्थिक सहयो ग